नेपाल आज | डा. गोविन्द केसीको स्वाथ्यस्थिति बिग्रँदो
समाचार Breaking News मुख्य समाचार स्वास्थ्य राजनीति प्रदेश २ प्रदेश ३ प्रदेश ४ प्रदेश ५ प्रदेश १ प्रदेश ७ प्रदेश ६
डा. गोविन्द केसीको स्वाथ्यस्थिति बिग्रँदो
‘माफिया, डन, नेताहरू पोस्ने ऐन ल्याउँदैछ’
काठमाडौं । जुम्लामा अनशनरत डा. गोविन्द केसीकोे स्वास्थ्य अवस्था बिग्रँदै गएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले बताएका छन् ।
उनको बिग्रँदो स्वास्थ्य अवस्थालाई दृष्टिगत गरी कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आपत्कालीन व्यवस्थापनका लागि उपकरण र औषधिको व्यवस्था गरिएको छ ।
शनिबार अपराह्नसम्म डा. केसीको स्वास्थ्यमा रगतमा सेतो रक्त कोशिकाको मात्रा घट्नुका साथै घाँटीको संक्रमण देखिएको चिकित्सकहरूले बताएका छन् ।
डा. केसी आफू अनशनमा रहँदाको अवस्थासम्म कुनै एन्टिबायोटिक्स नलिने पूर्ववत् अडानमा छन् । यसैबीच शनिबारनै डा. केसीले एक अपिल जारी गर्दै भने, ‘म अहिले जुम्ला कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सत्याग्रहमा छु । जुम्लामै किन गर्नुप¥यो सत्याग्रह भन्ने कुरामा चाहिँ, एक दशकदेखि गाउँगाउँमा स्वास्थ्य सेवा पुगोस् भनी लडिरहेका छौँ । गाउँका मान्छे, निम्न, मध्यम, विपन्न वर्गले पनि योग्यताअनुसार डाक्टर, नर्स अथवा विज्ञहरू बन्न सकन्, पढ्न सकून् । त्यस्तो खालको ऐन बनोस् । जबकि ग्रामीण भेगमा बस्ने ८० प्रतिशत जनता अपहेलित र उपेक्षित छन् ।’
उनको अपिलमा भनिएको छ, ‘सत्याग्रहका लागि हुम्ला, जुम्लाभन्दा उपयुक्त स्थान अन्यत्र कहीँ हुन सक्दैन । जुम्लामा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनेको ८ वर्ष भयो । तर, अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । कर्णाली भेग राज्यबाट सबैभन्दा बढी उपेक्षित क्षेत्र पनि हो । यहाँका मानिस गरिब छन्, बेरोजगार छन्, अशिक्षित छन् । ठूलो मेडिकल कलेज यस क्षेत्रमा थिएन । ८ वर्ष भयो, अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । सञ्चालनमा आएको भए यहाँका मान्छे डाक्टर बन्थे, नर्स बन्थे । यहाँका मान्छेहरू स्वास्थ्य सम्बन्धी विज्ञ बन्थे ।
यस क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा गर्थे । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सबैले प्राप्त गर्थे । यस ठाउँको समग्र विकास हुने थियो । तर, अहिलेको सरकार, जसलाई दुई तिहाइ मत दिएर विजयी बनाए, उनीहरूको हकहितविरुद्ध माफिया, डन, नेताहरू पोस्ने ऐन ल्याउँदै छ । हामीले आन्दोलन गर्दा जनतामुखी अध्यादेश बनेको थियो । त्यस अध्यादेशलाई तोडमोड गरेर माफिया, डन र नेतामुखी ऐन ल्याउन लागिएको छ । त्यसैको विरुद्धमा मैले सत्याग्रह सुरु गरेको हो । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा विशेषज्ञको कमी छ । सरकारको उदासीनताका कारण दक्ष जनशक्तिको कमी भएको हो ।
यहाँ भइरहेको टिममार्फत मेरो राम्रो हेरचाह भइरहेको छ । जबसम्म मेरो माग पूरा हुँदैन, सत्याग्रह रोकिन्न । सरकारका तर्फबाट विभिन्न बहानाबाजी गरेर मलाई यहाँबाट उठाएर काठमाडौं लगेर सत्याग्रह तुहाउने प्रयास हुँदैछ । सरकारलाई मेरो स्वास्थ्यको यति चिन्ता भएको हो भने मेरो माग तुरुन्त पूरा गर, अनशन तुरुन्त तोड्छु ।
कुरा साधारण छ । मेरो मागहरू थुप्रै छन्, त्यसमा चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा कुनै पनि तोडमोड नगरिकन यथारूपमा पारित हुनुपर्छ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तुरुन्त सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । अख्तियारले भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर गरेकाहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ । शिक्षामा राजनीतिक भागवण्डा र हस्तक्षेप अन्त्य गर्नुपर्छ ।’
प्रतिष्ठानका मेडिकल डाइरेक्टर डा. पुजन रोकायाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा डा केसीले जुम्लामै अनशन जारी राख्न चाहेको अवस्थामा आफूहरू उनको उपचार गर्न सक्षम रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
डा. केसी गत असार १६ गतेदेखि आमरण अनशनमा बसेका हुन् ।
डा. केसी ‘माफिया, डन, नेताहरू पोस्ने ऐन ल्याउँदैछ’